DAAWO: Barafuun dad badan ku Geeriyoodeen oo laga Cabsi qabo inuu geeska Afrikana soo gaadho. – Xeernews24
DAAWO: Barafuun dad badan ku Geeriyoodeen oo laga Cabsi qabo inuu geeska Afrikana soo gaadho.
9. Oktober 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Ciwaanada Warbaahinta iyo Baraha Bulshada Carbeed ayaa waxaa hareeyay hadal heyn ku aadan Barfuun halis ah oo ku faafay illaa 6 waddan oo Carbeed kuwaas oo kala ah, Masar, Sudan, Ciraaq, Kuwait , Algeria iyo Lubnaan.
Dowladda Masar ayaa soo saartay Digniin ku aadan Barfuunkaan iyadoona dhammaan Xarumaha Caafimaadka loogu baaqay in ay baaris qoto dheer ku sameeyaan Barfuunada soo gala dalka.
Digniinta Masar ayaa timid muddo bil kadib markii Wasaaradda Gaashaandhiga Dowladda Algeria ay soo saartay digniin midaan la mid ah oo ku aadan Barfuun dadka dilaya haddii muddo 3 Maalin uu Isticmaalo qofku kaas oo lagu Magacaabo ( Relax).
Cabsi xoogan ayaa soo food saartay shucuubta 6-daasi dal oo ay ugu horreyaan kuwa Masaarida kadib digniintaan cusub ay soo saartay dowladda Dalkaas.
Ciidamada Ammaanka Masar ayaa billaabay baaritaanno ay ka sameynayaan Goobaha lagu iibiyo Shoobinada , Dukaamada iyo meel kasta oo lagu iibiyo Barfuunada.
Khartarta Barfuunkaan ayaa la sheegayaa in ay ugu nugul yihiin dhalinyarada wadamada Carbeed ee Islaamka ah.
Hadaba arrinta ugu Muhiimsan ayaa ah haddii wadamada aan Kor ku soo xusnay oo leh dowlado awood leh oo ka baaraan daga Ganacsiga dibadda uga imaanaya Nacfiga uu u leeyahay Bulshadooda iyo halista uga imaan karta lagu arkay Barfuunkaas wax dila sida uu ugu Nugul yahay dalkeenna Somalia oo bur burkii dowladdii dhexe 1991-kii kadib aanu ka jirin Kontarool Rasmi ah oo la isku halleyn karo.
Somalia ayaa Leh Dekado iyo Garoomo ay ka soo dagaan Shixnado dalka dibaddiisa laga keeno , kuwaas oo horay ay uga jireen qaarkood cabashooyin ku aadanh tayadooda oo aan wanaagsaneen ,waana mid u nugul halista Barfuunkaan Cusub ee Kharta ku ah Nafta Beni’aadamka oo Magaciisa lagu sheegay Relax.
Si looga hortago Khatarta Barfuunkaas waxaa Masuuliyad ay ka saarantahay Dowladda Soomaaliyeed , Nidaamyada Maamul Goboleedyada ee ay sameysteen dadka deegaanka iyo Ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa ka keena Shixnadaha Ganacsi.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/10/relax.jpg 225 225 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-10-09 13:01:142017-10-09 13:01:42DAAWO: Barafuun dad badan ku Geeriyoodeen oo laga Cabsi qabo inuu geeska Afrikana soo gaadho.
DAAWO:ARAGTIDA QALOOCAN EE PROF.SAMATAR & ARIMAHA UU KA DHAXLEY AD-ADEYGIISA... Guddiga doorashada Maamulka Somaliland oo shaaciyay tirada codeyneysa.